AmaBruges aseBelgium, iVenice yaseNyakatho nendawo eyiGugu Lomhlaba | Ukuhamba kwe-Absolut
IBruges Town Hall
Idolobha laseBruges eBelgium lithole ama-epithets amaningi. Ibizwe ngokuthi "isimangaliso sangesikhathi esidlule" noma "iVenice yaseNyakatho", okuyisiqu sokugcina esesitholile Amsterdam noma Gothenburg nokuthi kungenxa yokuba khona kwazo okuyigugu iziteshi zokuzulazula.
Inhlokodolobha yaseFlanders, iBruges ibibambe isigaba sedolobha kusukela ngekhulu le-XNUMX futhi kumakhulu eminyaka alandelayo yaba nentuthuko enkulu ngaphansi kokuvikelwa kokuhweba ngoboya. Amandla wezomnotho akhuliswe ngokwengeziwe ngokuhlangana kwawo neHanseatic League kanye nokufakwa kwenkantolo ye UPhilip III waseBurgundy. Kusukela kula makhulu eminyaka kuningi lwezikhumbuzo ongazibona eBruges, isikhungo sazo esingumlando Amagugu Emhlaba kusukela 2000. Akungabazeki, ingenye yamadolobha amahle kakhulu eYurophu. Uma ufuna ukuyazi, sikumema ukuthi usilandele.
1 Yini ongayibona eBruges
1.1 Isigqoko sokuzivikela somlando
1.2 Isikwele seBurg
1.4 ISonto Lethu
1.5 Isibhedlela iSan Juan
1.6 Isigodlo saseGruuthuse
1.8 IKruisvest Park
1.9 Umnyuziyamu wobhiya
2 Yini ongakudla eBruges
3 Yisiphi isikhathi esihle sokuvakashela iBruges
4 Uzungeza kanjani amaBruges
Yini ongayibona eBruges
Akulula ukuhlanganisa yonke into ongayibona futhi uyenze eBruges. Ukubuka isikhungo salo esihle esingokomlando, ukuvakashela iminyuziyamu yaso enhle, ukunambitha ushokoledi waso omuhle noma ukuzula emiseleni yayo kungeminye yemisebenzi ebalulekile edolobheni lase AmaFlandes. Sizoqala uhambo lwethu.
Isigqoko sokuzivikela somlando
Isikhungo sezinzwa saseBruges eBelgium yiyona IGrote Mark noma iMeya yePlaza, okuthe, ngezindlu zayo zasendulo zafinyelela emgodini omise okonxantathu, indawo yayo ebanzi yabahamba ngezinyawo nezinqola zayo zamahhashi, ikunikeza ikhadi leposi eliphuphayo. Kuwo kufanele ubone ukwakhiwa kwe- Inkantolo Yesifundazwe, ukwakhiwa kwe-XIX ngesitayela se-neo-Gothic. Kepha ngaphezu kwakho konke, esigcawini unolunye lwezimpawu zamaBruges. Imayelana ne- IBelfort noma insimbi yensimbi, efinyelela umvuthwandaba ngesakhiwo esihle esenziwe ngamatshe esakhiwa ngekhulu le-XNUMX ezinsaleleni zangaphambilini.
Kubuye ngesitayela se-neo-gothic futhi kukalwa amamitha angama-83. Ungakhuphukela phezulu ukuze ube nokuhle idolobha View. Futhi, kufanele wazi ukuthi, njengombhoshongo wasePisa, uthambekele kancane, esimweni sayo ngamamitha ayi-1,20 ngakwesobunxele. Kepha, enkabeni yomlando weBruges unokuningi ongakubona.
Ibanga elifushane ukusuka kwangaphambilini, bekuyinqaba ebiyelwe ngodonga eneminyango emine namuhla esibe isikwele esisodwa edolobheni. Kuyo kuyamangalisa I-Stadhuis noma i-Town Hall, isakhiwo esihle sekhulu le-XNUMX esiphendula isitayela se-Gothic. Futhi, ngaphakathi unekamelo lezomlando, elinemibhalo nemidwebo ekhombisa amandla asendulo edolobha, negumbi lamaGothic, elinemidwebo yensimbi nethala elihle kakhulu lokhuni.
Futhi eBurg Square kukhona inkantolo ekhangayo o UBrugse Vrije, okungeke kube nzima ukuhlukanisa nge-facade yayo yakudala enezinsimbi zegolide namawindi abomvu. Ngaphakathi, iHholo le-Renaissance livelele, ngokhuni lwe-oki nangeziko lomlilo le-alabaster.
Ekugcineni, ekhoneni lesikwele une- I-Basilica yeGazi Elingcwele. Empeleni, lesi sakhiwo sekhulu le-XNUMX sinezindlu zamasonto amabili, elaseRoma elisesitezi salo esingezansi neleGothic esitezi esingenhla lapho kugcinwa khona izinsalela: Imbiza enomqondo igazi likaKristu zilethwe zivela eJerusalema yi-Count of Flanders, okwakungokwakhe. Njalo ngonyaka, okuqondana nosuku lokwenyuka, a Ukuqhutshwa Kwegazi Elingcwele, okungomunye wemicimbi yenkolo ebaluleke kakhulu eBelgium.
Futhi ubizwa IViña Monastery, isengxenyeni eseningizimu yesikhungo esinomlando. Iyinqaba eyiqiniso eyakhiwe ngengosi enhle yokungena, izindlu ezincane zeBeguines (i-oda lenkolo) ezakhiwa ngekhulu le-XNUMX, udonga olunomsele kanye isonto lama-gothic laseSanta Isabel.
Ngakolunye uhlangothi, isigodlo sezindela sisezinyaweni ze- Amanzi amancane, ichibi lokufakelwa elidalwe eminyakeni engamakhulu ayisishiyagalombili edlule ukuhambisa imikhumbi eyayilanda indwangu eFlanders edolobheni. Laziwa nangokuthi "ichibi lothando" ngoba linenganekwane yalo: eyomthandi owemba ithuna lesithandwa sakhe, ogama lakhe linguMinna, kulo.
Kufanele futhi uvakashele eBruges yaseBelgium leli thempeli le-gothic lekhulu le-XNUMX elingelinye lamabhilidi amade kakhulu emhlabeni. Lokhu kungenxa yokuhlaba umxhwele kwayo umbhoshongo odadayo, enokuphakama okungaphezu kwamamitha ayikhulu namashumi amabili.
Kepha uma ukubukeka kwayo kuyinto enhle, ukulindelwa okukhulu kukulindile ngaphakathi. Iqukethe amathuna oMbusi wokugcina waseBurgundy, uCarlos the Fearless, nendodakazi yakhe, uMaría de Borgoña, unina kaFelipe el Hermoso, owashada noJuana la Loca. Kepha, ngaphezu kwakho konke, sincoma ukuthi ubone ifayela le- Madonna waseBruges, isithombe semabula esenziwe ngu Michelangelo.
Isibhedlela iSan Juan
Phambi kwesonto esisanda kukhuluma ngalo futhi bekuyisikhungo sezempilo saseBruges sangesikhathi esidlule. Namuhla ingumnyuziyamu ophindayo ngalezo zikhathi futhi ubonise imidwebo yomculi weFlemish kusukela ngekhulu le-XNUMX. UHans Memling, obesendleleni wayeyisiguli esibhedlela.
Lesi sakhiwo samaGothic esasingeminye yemindeni ecebe kakhulu eBruges namuhla siyigugu lapho ungabona khona ukuthi impilo yayinjani kubosozimali baseFlemish ngekhulu le-XNUMX kanye namaqoqo abalulekile we-numismatics, tapestries and archaeology.
Eduze kwakhe unayo IGroeninge Museum, enye yezinto ezinkulu edolobheni. Inikezelwe kumdwebo odumile waseFlemish weminyaka yonke, onemisebenzi ngezinombolo ezinjenge UJan van Eyck, UGerard david o UHugo van der Goes. Kepha ubuye akhombise imisebenzi yokubonisa yaseBelgium kanye nomdwebo wesimanje we-posquerra.
IBelfort noma iBell Tower
Futhi ubizwa Idokodo laseRosarioUkubaluleka kwayo kuxhomeke ekutheni kwakuyimvelaphi yeBruges yaseBelgium, lapho ngekhulu le-XNUMX amaViking asatshwayo afika lapho ukuqhubekela phambili ezweni. Njengamanje ingenye yezindawo ezithwetshulwe kakhulu kuleli dolobha. Futhi kuzokuthakazelisa nokwazi ukuthi yindawo lapho abaningi be- izikebhe ewela imisele yaseBruges futhi ewela amanye amabhuloho amadala kakhulu edolobheni njengalawo I-Meebrug y I-Peerdenbrug.
Ngeke ukwazi ukusho ukuthi ulijabulele idolobha laseFlemish uma ungazulazuli ngemisele yalo. Ngaphezu kwalokho, amanani alolu hambo ashibhile impela: cishe ama-euro ayishumi. Akukho okumele kwenziwe, ngakho-ke, ngama-gondola akwa-Venice.
Ngemuva kokuvakashelwa kaningi, uzophinde ube nentshisekelo yokuphumula endaweni eluhlaza. Le paki ayiyona enye yendawo emaphakathi kakhulu, kodwa ingenye yezindawo ezithule kakhulu. Ngaphezu kwalokho, inokuheha okungeziwe: uzobona okujwayelekile izivunguvungu zomoya zaseBelgium. Okudume kakhulu yilokho kukaSint-Janshuis.
Njengoba sizobona maduzane, i- ubhiya Inesiko elide eBruges naseBelgium yonke. Lesi sigcinamagugu siseMeya yePlaza futhi, ngaphezu kokukukhombisa yonke inqubo yomlando yokwenza lesi siphuzo nezinto eziningi ezihlobene naso, sinendawo lapho unganambitha khona izinhlobo ezinhle kakhulu nesitolo lapho ungathenga khona uthanda kakhulu. uyayithanda.
Futhi, maphakathi nedolobha kukhona indawo yokuphisa utshwala, i- Isigamu Maan Brasserie. Isebenze kusukela ngo-1865 futhi ungayibuka ngeso lengqondo. Futhi inendawo yokunambitha.
Yini ongakudla eBruges
I-gastronomy yedolobha laseFlemish ihlukile futhi iyinambitha. Kepha ikunikeza imikhiqizo embalwa ejwayelekile elula njengokuthi mihle kakhulu. Eyokuqala yi- ama-chips. Kuthiwa okuhle kakhulu emhlabeni kulungiselelwe eBruges. Ungabathola kunoma iyiphi indawo yedolobha futhi futhi bahambisana nososo abangafika kwabayishumi abahlukene.
Amafriji aseFrance asetshenziswa ngisho nokuhambisana nezinye izitsha ezijwayelekile zedolobha laseFlemish nakulo lonke iBelgium. Imayelana ne- izimbaza, omunye umkhiqizo ophekwe ngezindlela eziyinkulungwane: okwemvelo, newayini, nobhiya ngisho nokhilimu.
Umkhiqizo we-quintessential wesithathu eBruges ngu chocolate. Amashokolethi abo amnandi kakhulu. Futhi singakutshela okufanayo nge ama-waffles, nazo ezigcwala cishe noma yini. Labo abanokhilimu nezithelo bayanambitheka, kepha nalabo abanoshizi.
Ukuphuza, njengoba sikutshelile, Ubhiya waseBelgium. Kodwa-ke, sikweluleka ukuthi uqaphele ngaphambi kokuzama ngoba abanye baneziqu eziphakeme kakhulu, ngisho neziqu eziyishumi nanye.
Ngaphezu kwemikhiqizo engenhla, i-gastronomy yeBruges de Belgium inezinye izitsha ezijwayelekile. Phakathi kwabo, sincoma ukuthi uzame ifayela le- I-flamenco carbonada, isitshulu senyama nobhiya; i isitembu, imifino ecubuziwe namazambane kuphekwe nesoseji noma ubhekeni; i ama-endive nge ham ne-au gratin ku-béchamel sauce noshizi noma indlu, isitshulu sikheroti, amazambane, amalikhi, ubhekeni, isoseji no-anyanisi.
Njengama-dessert, i- ushizi, okukhona cishe izinhlobo ezingamashumi ayisishiyagalombili. Imnandi futhi i- uphudingi wesinkwa, uswidi owenziwe ngesinkwa esidala, ibhotela, ubisi noshukela. Futhi kungashiwo okufanayo irayisi ikhekhe, enokhilimu, i-vanilla noma ushokoledi.
Ekugcineni, ngokuqondene neziphuzo ezimhlophe, i- izinsini kusuka edolobheni laseFlemish. Kepha kukhona notshwala obudumile eBruges nakuyo yonke iFlanders okufanele uzame ngoba, ngaphezu kwalokho, ukugaya ukudla. Ubizwa ngegama U-Elixir d'Anvers futhi yenziwa ngezinhlobo ezingaphezu kwamashumi amathathu zamakhambi.
Yisiphi isikhathi esihle sokuvakashela iBruges
IBruges yaseBelgium ine- Isimo sezulu sezwekazi i-Atlantic. Ubusika kubanda, ngamazinga okushisa angavamile ukweqa ama-degree amahlanu, yize engavamisile ukwehla ngaphansi kuka-zero. Ngalesi sikhathi, imvula ivame kakhulu ngakho-ke uzodinga isambulela.
Ngokwabo uhlangothi, ihlobo efudumele futhi enobungane. Amazinga okushisa awafinyeleli ekuthwesweni iziqu okuphezulu, ahlala azungeze ama-maximum angamashumi amabili nanhlanu kanye nokuncane okuyishumi. Ngakho-ke, akusilo idolobha lapho uzoshisa khona.
Ngakho-ke, isikhathi esihle kakhulu sokuvakashela iBruges yihlobo. Kodwa-ke, futhi lapho izivakashi eziningi ziya edolobheni. Ngakho-ke, uma ufuna ukuthula kwengqondo okwengeziwe, sincoma ukuthi ungene kuqala. Amazinga okushisa amnandi futhi aziningi izivakashi.
Uzungeza kanjani amaBruges
Idolobha laseBelgium linesikhumulo sezindiza, lowo ose-Ostend Bruges, okuqhele ngamamayela ayishumi nanhlanu. Inikezelwe ikakhulukazi ekuthuthweni kwemithwalo, kepha izinkampani eziningi ngokwengeziwe zithwala abagibeli. Uma ukuyo, ungaqasha imoto noma uthathe ulayini webhasi oxhuma neBruges.
Cishe indiza izokusa Isikhumulo sezindiza saseBrussels. Kulokhu, kufanele uthathe isitimela esiya eNyakatho Nenhloko-dolobha, futhi lapho, uthathe esinye uye eBruges. Owokuqala uthatha cishe imizuzu eyishumi nanhlanu, kanti owesibili wenza uhambo ngamashumi ayisishiyagalolunye.
Inqola edonswa ngamahhashi eBruges
Kakade edolobheni le-flamenco, indlela engcono yokuhamba kuyo ibhasi. Basebenza usuku lonke kusuka ngehora lesihlanu ekuseni kanti intengo yethikithi icishe ibe ama-euro amathathu. Kukhona futhi i- ikhumbi yezivakashi lokho kwenza umzila wemizuzu engamashumi amahlanu edlula edolobheni. Kodwa-ke, ayibizi: ibiza cishe ama-euro ayishumi nanhlanu.
Uma uzibheka njengomsubathi, ungayiqasha i-bicicleta. AmaBruges awakhulu kakhulu futhi, noma kunjalo, awudingi ukwenza umzamo omkhulu. Intengo yayo ingama-euro ayishumi. Okuthandana kakhulu ukuthi uqasha i- inqola yamahhashi. Uzobathola kuGrote Mark futhi babiza cishe ama-euro angamashumi amane. Kodwa-ke, akuyona intengo ebizayo uma ubheka ukuthi bathatha abantu abangafika kwabahlanu.
Kepha esikuphindayo ukuthi wenza a mini canal cruise. Hhayi ngoba zivamile, kepha futhi ngoba zikunikeza omunye umbono kuzikhumbuzo ezithandwa kakhulu. Futhi, intengo yabantu abadala ingama-euro ayishumi kuphela.
Ekuphetheni, iBruges yaseBelgium, iVenice yaseNyakatho, enye yezindawo ezinhle kakhulu eYurophu. Ngesikhungo esinomlando okuyisizinda samaGugu omhlaba, iminyuziyamu, i-gastronomy enhle nenethiwekhi yezokuthutha enhle kakhulu, ukubheja okuphephile uma uhlela ukudabula iZwekazi Elidala.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » AmaBruges aseBelgium